Musavani oo sheegey in diyaar uu u yahay in ciidammo uu keeno Somaliya haddii laga taageero saadka iyo sahayda. [Akhris …] – Radio Daljir
Musavani oo sheegey in diyaar uu u yahay in ciidammo uu keeno Somaliya haddii laga taageero saadka iyo sahayda. [Akhris …]
Kampala, June 30- Madaxweynaha dalka Uganda Yuweri Musevani oo saxaafadda kula hadley magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa waxaa uu sheegey in dalkiisa uu ka jawaabayo codsi dhawaantan ay jeedisey dawladda KMG ee Soomaaliya kaas oo ah in ciidammo difaaca DFKMG la keeno dalka Soomaaliya.
Mr Musevani waxaa uu ka codsadey waddamada caalamka in ay bixiyaan dhammaanba waxii tasiilaad ah ee ku baxaya ciidamada dalka Soomaaliya imaanayo, waxaana uu sheegey in taageero la?aan aysan haba yaraatee aysan sii taagsaneyn dawladda FDKMG ee Soomaaliya.
Waxaa uu tusaale ahaan u soo qaatey xilligii uu halgamayey Mr Musevani oo ay la wareegeysey Jabhaddiisii awoodda dalka Uganda in ay taageero ka heshey waddamada deriska la ah dalkiisa.
Waxaa uu sheegey sidaas darteeed in dalkiisa uu diyaar u yahay in uu sii kordhiyo ciidamada ka jooga dalka Soomaaliya haddii la siinayo dhammaan waxii tasiilaad ah ee ku baxaya muddada ay joogayaan dalka Soomaaliya ee ay ka qeyb qaadanayaan hawlaha nabad ilaalinta.
Uganda ayaa waxaa iminka ka jooga ciidammo gaaraya dhawr Kun oo Askari magaalada Muqdisho ee ay aafeeyeen dagaalladu, waxaana ay ka qeyb qaataan ciidamadaasii hawlo lagu ilaalinayo ilo muhiim ah oo ku yaalla gudaha magaalladaasi oo ay ka mid yihiin xarunta Madaxtooyada, Garoonka Caalamiga ah iyo Dekadda magaalada Muqdisho.
Hadalka Mr Musevine ayaa yimid kaddib markii Dawladda KMG ee Soomaaliya ay ku baaqdey dhawaantan in lala soo gaaro ciidammo ka difaaca kooxaha ka soo horjeeda kuwaas oo iminka u muuqda in dawladdaba ay ka xoog badanyihiin, waxaana ka mid ahaa waddamadaasi dalalka deriska la ah Somaliya iyada oo aysan jirin cid si toos wali uga jawaabtey dalabkii DFKMG.